"Dikloberl" kuyinto esuselwe phenylacetic acid, okuyinto has nomphumela eqeda ukuvuvukala. Diclofenac Sodium - nemiyo asebenzayo abakhona kule nokulungiselela. It has anti-edema, antipyretic nemiphumela analgesic. I nomuthi has izinhlobo ezihlukene medicamentous, ibuye ikhishwe ngendlela suppositories. Amakhandlela Bheka "Dikloberl" ayitusi ukusetshenziswa izingane ezingaphansi kweminyaka engu-15.
Sebenzisa amakhandlela "Dikloberl" kungaba ngaphansi izifo elandelayo:
ukuvuvukala uhlelo zemisipha;
sokuqaqamba kwamalunga zonke izinhlobo;
ankylosing spondylitis futhi Personeydzha Turner;
migraine, neuralgia, ubuhlungu yamazinyo, sciatica futhi ossalgiya (uma kukhona ubuhlungu);
ngesikhathi unesifo noma abandayo (uma kukhona imfiva) futhi;
Iziguli eziningi ubuhlungu, babe "Dikloberl" (amakhandlela). Yokusetshenziswa ku iphasela ngalinye.
Isikali nezindlela kwesicelo
Amakhandlela Bheka "Dikloberl" lisetshenziswa ezingaphezu kuka izikhathi ezimbalwa usuku 50 mg, futhi uma umthamo 100 mg, izikhathi ezingu-1 usuku rectally. Lapho umuntu enomuzwa izimpawu zokuqala a migraine, udinga ngokushesha lokhu izidakamizwa. Ngemva ukunyakaza wamathumbu, kumele ufake suppositories ekujuleni ingquza. Udokotela kufanele linqume ukwelashwa lesifanele, okungase kube kuqhubeka isikhathi eside, uma kukhona izifo rheumatism.
Kukhona kuzo zonke iphakethe zomuthi "Dikloberl" imfundiso. Amakhandlela ube Izimo ezilandelayo. Awukwazi ukusebenzisa kwabo uma:
Kukhona hypersensitivity emuthini.
Man has izifo njengesifuba somoya, sokuntuleka kwegazi kanye triad.
Esikhathini esiswini, kukhona izilonda futhi erosions.
Abalimala ingemuva kanye babe hemorrhoids.
Ubudala ezingane ezineminyaka engu-6.
"Dikloberl" Amakhandlela babe Izimo eziningi, ngakho kumele kusetshenziswe ngokuqapha okukhulu bona. Abesifazane ku simo akumele usebenzise lesi izidakamizwa njengoba kwesisu nokuguqulwa kungenzeka izigaba zokuqala zokukhulelwa. Ingane kusho izimbangela ukuthuthukiswa isifo senhliziyo emfantwini anterior udonga besisu.
Abantu abadala kanye nalabo babe inhliziyo futhi ukungasebenzi kwezinso, kanye nalabo abasebenzisa isisu kumele kusetshenziswe "Dikloberl" kuphela ngaphansi kweso lwezokwelapha ekhethekile. Sihlale njalo siqaphele isimo izinso kuyadingeka.
Isikali okweqa ithuluzi kungabangela:
ukopha pheshana emathunjini;
Amakhandlela Bheka "Dikloberl" mg 100 no-50 edayiswa ibhamuza amaphakethe 5 noma 10 suppositories.
ukusetshenziswa ngesikhathi esifanayo nezinye izidakamizwa
Odokotela avunyelwe ukuba kuhlangene nezinye izidakamizwa "Dikloberl" (amakhandlela). Yokusetshenziswa Nokho, ukuthi ukusebenzisana ezinye izisetshenziswa kungase kube nemiphumela ehlukile.
Uma usebenzisa izidakamizwa "Dikloberl" kanye nemiphumela isisu of diclofenac is attenuated emzimbeni. Lapho isetshenziswa ngesikhathi esifanayo ne inhibitor emzimbeni kuyaphazamiseka nokusebenza kwezinso. Probenecid ndawonye nale izidakamizwa siyehla excretion of diclofenac nomzimba womuntu.
Ukusetshenziswa "Dikloberla" e zabesifazane
Amakhandlela Bheka "Dikloberl" e zabesifazane ngokuvamile usetshenziselwa esikhathini okubuhlungu kanye ukuvuvukala ezikhiqiza amaqanda. amantombazane nabesifazane abaningi ekuqaleni zokwehlukaniswa kungenzeka sebuhlungwini obunzima, okuyinto wawubaphuca ukukwazi kwabo ukusebenza. Lezi amakhandlela asetshenziswa emkhakheni ngempumelelo. Ngaphansi kwethonya izinga lokushisa zangaphakathi usufakwa suppository emomozini ngokushesha chaza uhambe ngqo isitho onesifo, okuyinto isheshisa inqubo yokwelapha. Kufanele isetshenziswe njalo ngemva kwamahora 6.
Ukuvuvukala amaqanda ngokuvamile iphathwa isikhathi eside futhi bangaba ezingamahlalakhona. Umuthi emabangeni sokuqala lesi sifo ngempumelelo aqede ubuhlungu kanye nokucindezeleka ezicutshini avuvukele yomzimba zesifazane.
Amakhandlela Bheka "Dikloberl" wabasiza iziguli eziningi ukusungula ukudlula ejwayelekile umjikelezo wokuya esikhathini. Ngemva kokuya kubo kanye, Ladies ukweluleka lokhu izidakamizwa abangani babo abanale nezinkinga ezifanayo izifo zabesifazane.
ekhemisi ngalinye umphakeli ayo izidakamizwa, ngakho izindleko zingahluka. Udinga ukuthenga "Dikloberl" (amakhandlela)? intengo zabo zokhahlamba kusuka ruble angu-50 kuya 110. Lokhu umuthi ngempela ezishibhile, kodwa kusiza nezifo eziningi. Imininingwane Qedela kuqukethwe iphakethe ifaka kusho "Dikloberl" imfundiso. Amakhandlela Bheka, njengoba kuchazwe therein ingase isetshenziselwe ubuhlungu oyingozi.
Izibuyekezo eziningi ukukhuluma mayelana nemiphumela emihle eziye kwavela ngemva Ukusetshenziswa kwalesi thuluzi. izinkinga zabesifazane isinqumo ngemva ukusetshenziswa elilodwa noma amabili. nobuhlungu obubangelwa emalungwini nemisipha ngemva izimpawu zokuqala ukuvuvukala ekusebenziseni wokulungiselela ezifana "Dikloberl" cishe wanyamalala ngokuphelele. Kungakhathaliseki ubulili lomuntu, lokhu muthi ngokusiza wonke umuntu edinga kuso.
Nakuba imanuwali uthi abesifazane abakhulelwe kungukuthi Kunconywa ukuba asebenzise lezi amakhandlela semester lwesithathu, odokotela ngezinye izikhathi akunikeze ukuba banciphise ubuhlungu e emuva kwakhe. Sebenzisa izidakamizwa kumele kube kulawulwe ngokucophelela we wezifo zabesifazane yokugwema imiphumela okungafunwa.
The main isici esihle salezi amakhandlela kuyinto ukumuncwa kwabo okusheshayo phakathi ingemuva. Abantu abaningi bathanda ukulusebenzisa nge amakhandlela, hhayi amaphilisi kanye imijovo. Ngemuva kokufaka isicelo amaphilisi ungathola ezinye pheshana gastro-emathunjini, futhi ketshezi uqobo diclofenac enikeziwe endaweni ethintekile okungenani akuphelele.
Ububi eyinhloko leli thuluzi okulandelayo:
Esikhathini iphakethe kukhona nokokuyifaka ekhethekile, okungase suppositories iqondiswa.
Anakho eziningi Izimo.
Abantu abaningi abadala abanezinkinga ngokuhlanganyela, kodwa wachaza ukusetshenziswa kwezidakamizwa it is hhayi Kunconywa.
Abakhulelwe njalo ubuhlungu emuva, kodwa sebenzisa "Dikloberl" kuphela ngaphansi kweso lwezokwelapha.
Yiqiniso, abantu abaningi abane-ukubukeka idatha ubuhlungu imithi ukusetshenziswa ngenxa yezindleko zayo ongaphakeme nokuphumelela kwaleso sembatho. Pharmacy amaningi we-intanethi ukunikela "Dikloberl" hhayi kuphela ukuthenga okudayisa, kodwa futhi wholesale. Kukhula inani ethengwayo, ephansi intengo.
Umuntu ngamunye kumelwe njalo uqaphele impilo yabo, ubone udokotela wakho. Lo chwepheshe lizosiza ukukhomba izinkinga eziningi zomzimba wakho kusaqalwa. Into esemqoka - ukuba ibhekane Luhlolo professional njalo.
"Venofer": analogue, izincazelo zabo kanye nokubuyekeza
I izingwejeje okuphakelayo emahlathini zethu?
Zaharov Aleksey Vladimirovich, umlingisi: Biography, lokusungula
"Thiophane M": libuyekeza oncologists mayelana izidakamizwa